Vonoan’olona, fandrobana, fanolanana, fampihorohoroana: tambajotran-jiolahy mahery vaika ravan’ny zandary | NewsMada
Fandrobana, fampihorohoroana, fanolanana, fandratrana… Eny, hatramin’ny vonoan’olona mihitsy aza. Nampikaikaika ny mponina any Imerintsiatosika sy ny manodidina mihitsy ity tambajotran-jiolahy, ravan’ny zandary, ity.
Ny 17 oktobra lasa teo, voasambotry zandary avy ao amin’ny vondron-tobim-paritra Arivonimamo ny 10 lahy ao anatin’ity andian-jiolahy ity. Tsy nijanona hatreo fa nohalalinina misimisy kokoa ny fanadihadiana sy ny famotorana. Omaly, araka ny tatitra voaray, niampy roa hafa indray ireo voasambotra. Izany hoe, tafakatra 12 izany ireo voasambotra ary efa eo am-pelatanan’ny zandary. Fantatra nandritra ny fanadihadiana sy ny famotorana natao tamin’izy ireo avokoa ny fomba sy ny tetikady fanaon’ity tambajotran-jiolahy ity. Fantatra sy sarona tamin’izany koa ireo entana halatra maro voaroban’izy ireo tao anatin’ny iray volana, ireo fitaovana fampiasany… Anisan’izany ny basy poleta vita gasy, miaraka amin’ny “chargeurs” miisa roa sy bala miisa sivy. Ny roa lahy amin’ireto 12 voasambotra ireo koa, fantatra fa anisan’ny mpamatsy bala ireo jiolahy ao anatin’ity tambajotra ity.
Heloka bevava maro…
Araka ny tatitra nataon’ny kanomandin’ny Vondro-tobim-paritry ny zandary Arivonimamo, nandray an-tanana ity raharaha ity, efa amam-bolana maro tokoa ity andian-jiolahy ity ny nampitondra faisana ny mponina ao Imerintsiatosika sy ny manodidina amin’ny asa ratsiny; fandrobana mitam-piadiana, vaky trano, fampihorohoroana… Tsy vitan’izay, iharan’ny fanolanana ataon’izy ireo koa ny zaza amam-behivavy amin’izay tokantrano lasibatr’izy ireo. Raha akapoka, tena andian-jiolahy kalazalahy amin’ny heloka bevava mahery vaika tokoa izy 12 lahy voasambotra ireto.
Voalaza fa nahafaly sy nahavelombolo ny vahoakan’Imerintsiatosika sy ny manodidina tokoa ny fahatrarana sy ny naharavan’ny zandary ity tambajotran-jiolahy ity. Na izany aza, tsy hijanona hatreo ny ezaka fampandrian-tany ataon’ny zandary. Tanjona mantsy ny hamongorana araka izay tratra ny tsy fandriampahalemana. Izany indrindra no mbola iantsoan’izy ireo fiaraha-mientana sy fiaraha-miasa amin’ny rehetra, tsy hilasalasa amin’ny fanomezam-baovao manoloana ny toe-javatra mampiahiahy amin’ny alalan’ny antso an-telefaonina 034 14 007 76. Manome toky ny zandary fa hijanona ho tsiambaratelo tanteraka ny mombamomba ireo loharanom-baovao.